Xildhibaanad KENYAN ah Oo aflagaadeysay Sarkaal Soomaali ah” Kismaayo maahan halkan ee orod” | Garadag News
Xildhibaanad KENYAN ah Oo aflagaadeysay Sarkaal Soomaali ah” Kismaayo maahan halkan ee orod”
March 18, 2019 - Written by garadag garadag
Waxaa soo shaac baxday oo baraha bulshada lagu hadal qaaday mid ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka dowladda Kenya oo si cunsuriyanimo ah ula hadleysa askari ka tirsan Booliska Kenya balse asal Soomaali ah.
Waxaa baraha bulshada lasoo dhigay muuqaal muujinaya hanaan hadalkeeda, taasna waxey keentay iney dowladda Kenya ku abaalmariso xabsi aan la shaacin sida uu usii dheer yahay.
Waruguru ayaa mar kale la arkay iyadoo xaalad kale ku jirta maadaama lagu sawiray iyadoo saaran gaariga Booliska si loogu fuliyo xukunka xabsiga ah ee lagu soo rogay.
Haweeneyda waxey muujisay bahdilaad weyn iyo cunsuriyanimo, aad ayey ugu qeylisay Sarkaalka Booliska ah kaas oo isna u muujiyay adeecid.
“Meeshaan maahan magaalada Kismaayo, bax oo soo xir-xir Al-Shabaab iyo tuugada, kana fogow dadka ganacsanaya” ayey ahaayeen hadaladii laga soo qabtay gabadha keenyaatiga ah ee qabsatay baraha bulshada.
iyada oo la hadleysa sarkaalka Booliska ah oo lagu magacaabo Cabdi Cali.
Sheekadu waxey gaartay meel sare maadaama Martha Karua oo ah hogaamiyaha xisbiga ay ka tirsan tahay haweeneydaan ee lagu magacaabo [Narc Kenya party] uu aad u cambaareeyay falka ay sameysay xildhibaanadda.
Sida gadaal laga soo wariyay, xildhibaanadda waa laga sii daayay xabsiga kadib markii la damiintay, balse dib ayey booliska ugu yeeri karaan hadii loo baahdo si wax looga weydiiyo kiiska.